Lozam-pifamoivoizana Andranovelona RN 4 Anio maraina no halevina ny Mompera Jean de Lacroix
Anio alarobia 21 aogositra amin’ny 9 ora maraina eny Andohalo ny lamesa fandevenana an’i Mopera Jean de Lacroix Ramaroson izay matin’ny lozam-pifamoivoizana. Hafenina eny amin’ny fasan’ny Misionera eny Ambohipo izy avy eo.
Nihenjana tampoka ny hozatr’i Mompera Jean de Lacroix teny ambony môtô ka nivarina tany an-kady, Andranovelona, lalam-pirenena fahefatra izy. Notsindrian’io kodiaran-droa io tao anaty hantsana izy, ny harivan’ny sabotsy teo tamin’ny 7ora sy sasany, raha ho any Ambohidratrimo toeram-piasany. Mpamily kamio nandalo no nahatsikaritra jiro tao anaty hantsana. Niantso ny fokonolona teny amin’ny manodidina izy sy ny mpanampy azy. Avy eo, nampilaza ny mpitandro filaminana izy ireo. Mbola nisy aina nitampify tao amin’ny niharan-doza ka nentina teny amin’ny hopitaly Bejofo Mahitsy. Noho ny dona nahazo azy anefa, tsy tana ny ain’ity pretra avy amin’ny fiangonana Masindray Ambohimiadana ity.
Araka ny fampitam-baovao hatrany, efa niharan’ny lozam-pifamoivoizana taona vitsy lasa ity mpitondra fivavahana ity. Saika nivarina tao Tsimanatimindrana, Ambavaloza antampontanànan’Andramasina, ny fiara nentiny izay simba tampoka, taona vitsy lasa izay. Efa nitondra fiangonana tany Antanetibe Anativolo, Imerinafovoany, Isotry, FTMTK Ambohipo, Ambatolampy, Andohalo Ambavahadimitafo ary teny Ambohidratrimo izy izao nindaosin’ny fahafatesana teo amin’ny faha-13 taona naha-pretra azy izao.